(၄) ဘွရှင် (ခေါ်) မြတ်သိန်းထွန်း၊ ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း(၃)၊ ၂၀၁၂၊ Arakanese၊
(၅) Francis Buchanan. “A comparative Vocabular of Some of the languages Spoken in the Burma Empire.” P.55. Also see Willem van Schendel (ed.)“Francis Buchanan in South East Bengal (1798): His journey to Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Noakhali and Comilla,”p. 55.
← လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး – ကျောက်ဖြူ
ရခိုင်ပြည်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် →